उप संयोजक शुक्रराज न्यौपानेको युरोप संयोजकका लागि विशेष तयारी - दर्पण संसार
उप संयोजक शुक्रराज न्यौपानेको युरोप संयोजकका लागि विशेष तयारी
गैर आवासिय नेपाली संघ यूरोप क्षेत्रका उप संयोजक शुक्रराज न्यौपाने संगका भलाकुसारी
२०७८ श्रावण २३, शनिबार १४:१९ बजे
गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अधिवेशन प्राय सकिएका छन र अब सबैको ध्यान आगामी केन्द्रीय महधिवेशन तर्फ मोडिएको छ । यसै सिलसिलामा गैर आवासीय नेपाली संघ आयरल्याण्डका पूर्व अधक्ष्य एवं वर्तमान युरोप उप संयोजक शुक्रराज न्यौपाने संग गरिएको कुराकानी केहि अंशहरू।
१ . शुरु गरौ आयरल्यान्ड बाट , के छ त्यहाँ को खबर ?
समग्रमा भन्नु पर्दा अन्य यूरोपिएन मुलुक जस्तै आयरल्यान्डको परीस्थीति covid 19को महामारीबाट मुक्त हुने वाटोमा अगाडि बढेको छ । सबै कुराहरु समान्य अबस्थामा फर्किने क्रम जारी छ । लगभग सबै १६ वर्ष भन्दा माथिको उमेर समुहले खोप लगाई सकेको वा लगाउन चाहनेका लागि सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छ । हामी नेपाली समाजले पनि त्यो सुविधाको उपयोग गरेका छौ । यदि कोही साथीहरु नबुझेर वा अन्य कारणले गर्दा खोप लिनु भएको छैन भने कृपया यथाशीघ्र नजिकको बाल्क इन सेन्टरमा गएर अथवा अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरि उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।
२. तपाई त एन आर एन युरोपको उप - संयोजक पनि हुनु हुन्छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ यो बेलामा ?
व्यक्तिगत रुपमा दैनिक जीवनयापनको लागि समयको व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक कार्यका लागि पनि व्यस्त छु । विशेष गरि यो समय युरोप भरीका एनसीसीहरुको अधिवेशन ले गर्दा अझ बढी व्यस्त भएको अवस्था हो ।
३ . एनसीसीको अधिवेशनको कुरा गर्दा के छ समग्र युरोपको अवस्था ? बाहिर राम्रो समाचार सुनीदैन नी ?
हाल सम्म गैर आवासीय नेपाली संघ युरोप अन्तरगतका अधिकांश एनसीसी हरुको अधिवेशन सकिएको छ । निश्चयनै अधिवेशनका क्रम वा अगीपछी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थाको प्रयोग गर्न खोजिएको छ त्यो दुःखद हो । हुन त यसको स्थापना कालदेखि नै जानेर वा नजानेर संस्था मुखी भन्दा पनि व्यक्ति मुखी एनआरएन लाई प्रसय दिईदै आएको ईतिहास हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ जुन गलत थियो । अब ढिलो नगरी संस्थालाई नाराम्रामा मात्रै सीमित नगरी सफा नियतका साथ विकृति विसङ्गति लाई हटाएर संस्थागत गर्नतर्फ तमाम नेपाली डाएस्पोराहरु लाग्न जरुरी छ ।
४. विकृतिको कुरा गर्नु भयो । तापाई जस्तो नेतृत्व र अन्य अधिकांश गैर आवासीय नेपालीहरु को गुनासो पनि यही छ । शुद्धीकरण कसरी सम्भव होला ?
प्रश्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद । सर्बप्रथम हाम्रो समाजमा नेतृत्व गर्छु भनेर आउने साथीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विभिन्न परीवेशमा एउटै कुराको फरक फरक व्याख्या गरेर जनमानसमा भ्रम पैदा गरेर गलत नजीर स्थापित गर्न बन्द गर्नु पर्यो। विधि विधान पद्दति भित्र पहिला आफूलाई राख्नु पर्यो र समाज सेवाका पाटाहरु को महत्वलाई बुझेर अगि बड्नु पर्यो।
यहा त यतीसम्म भै रहेको छ कि स्वार्थ मिल्दा हिजो आफूले उठाउदै आएको गलत प्रक्रीयाको पक्षमा आत्मसमर्पण गर्ने अनि स्वार्थ बाझिदा एकले अर्को लाई व्यक्तिगत रूपमै तल्लो स्तरमा उत्रिएर समाजलाई भ्रम श्रृजना गरि बिभाजित गर्ने । अनि गोहीको आँशु बगाए जस्तै आफू सक्षम र अरु असक्षम भन्ने नारा दिदै नेतृत्वको दौड धुप गर्ने। यी र यावत समस्याले गर्दा एनआरएनको साख केही धमिलो भएको अवश्य छ । यसबाट माथि जब सम्म उठ्न सकिन्न तब सम्म अगाडिको बाटो सफा राख्न सकिन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।
५. तपाई को शब्द लाई सापटी लिदै, सफा पानी रुपी एनआरएन धमिलो भएको छ । अब यसलाई सफा गर्नतर्फको यात्रा अझ भनौ नेतृत्वको दौडमा तपाईको आगामी लक्ष्य के हो ?
आजको जमानामा हाम्रो प्राकृतिक मुहान बाट बग्ने स्वछ पानी जस्तै समाजको कल्पना गर्नु त सम्भब नहोला । कीनकी हामीले यति मिसावट गर्यौ कि अब शत प्रतिशत आशा राख्नु मूर्खता नै हुन जान्छ। जहा सम्म सफा गर्नेकुरा छ , यसको लागि नेतृत्वमा नै आउनु पर्छ र एक्लैले सबै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होईन। नेतृत्वमा नरहेर पनी आफ्नो विचार र भावनाहरु अन्य वौद्धिक र विज्ञ साथीहरु संग सेयर गरिकन समाजमा राम्रो भूमिका पनि खेल्न सकिन्छ । अहिले सम्म युरोप भित्रका साथीहरुको विश्वाशको कारणले गर्दा आयरल्यान्ड जस्तो सानो देशमा रहेर पनि युरोप उपसंयोजक जस्तो गरिमामय पदमा रहेर काम गर्ने र सिक्ने मौका मिलेको छ । अब अगाडिको बाटो पनि सबैको सहयोग र सल्लाहमा तय हुनेछ । म एउटा कुरामा के प्रष्ट छु भने व्यक्ति स्वयमा केही पनि होइन जब सम्म उसलाई साथ सहयोग र विश्वाश गर्ने अरु हुदैनन भने । त्यसैले साथीहरुले विश्वास गरेर सहयोग गरेको खण्डमा मेरो स्वभाविक उमेद्वारी युरोप संयोजकमा रहने छ । आशा छ सदैव झै सम्पूर्ण साथीहरुको सहयोग र सदभाव मिल्ने नै छ ।